आफ्नो वृद्धभत्ताको पैसा लिएर क्वारेन्टाइनमा राहत बाढ्ने यी दुई महान आमाहरु ,! ,पूरा पढ्नुहोस – Sunaulo Post
मुख्य पृष्ठ /समाचार/आफ्नो वृद्धभत्ताको पैसा लिएर क्वारेन्टाइनमा राहत बाढ्ने यी दुई महान आमाहरु ,! ,पूरा पढ्नुहोस
स्याङ्जाको वालिङ १० मदिखोलाका ७८ वर्षीय जमुना अधिकारी र ८६ वर्षीय उमाकुमारी भट्टराईले आफूहरुले पाएको वृद्ध भत्ताको रकम बाट राहत वितरण गरेका छन् । भारतलगायत विभिन्न क्षेत्रबाट आएर पूर्णमृत भबानी माविको क्वारेन्टाइन बसेकाहरुलाइ खाद्यान्न सहयोग गर्ने उदेश्यले रहात दिएको उनीहरूले बताए ।
मरेर स्वर्ग गइएला कि भन्ने धार्मिक बिश्वासले सहयोग गरेको बताउँदै जमुना अधिकारी भन्छिन्, ‘जताततै महामारी रोगले सताएको छ । राज्यबाट आएको पैसा क्वारेन्टाइनमा थुनिएर बसेका छोराछोरीलाई सहयोग गरेका छौँ।’‘राज्यबाट आश मात्र होइन, बिपदको बेला राज्यलाइ सहयोग गर्न पनी सिक्नुपर्दछ।
यी बुढी आमाहरुले उदहारणीय कार्य गर्नुभएको छ’, वडा अध्यक्ष अनन्तराज गैह्रेले बताए।अधिकारी र भट्टराइले फुर्सदको समयमा बुनेको टपरीसमेत वडा अध्यक्ष अनन्तराज गैह्रे र वडा सदस्य पीताम्बर भुषाललाई प्रदान गरेकाछन् ।उनीहरुले चाउ- चाउ, दाल, चामल लगाएतको खाद्यान्न सहयोग गरेका हुन् ।